टेम्स टाउन, चीनको पुरानो इ England्ल्यान्डको एउटा टुक्रा | यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | संघाई, यात्रा
पुरानो युरोपमा अझै आकर्षण छ र मिडियाको माध्यमबाट घुम्ने संस्कृतिले जहिले पनि यसलाई एक वा अर्को तरीकामा दर्साउँदछ, यसले विश्वको बाँकी ठाउँबाट आगन्तुकहरूलाई आकर्षित गर्दछ। कुनै पनि युरोपेली शहरमा हामी अमेरिकी, अफ्रिकी वा एशियाली पर्यटक भेट्छौं।
सबै जना पेरिसको सडकहरू, म्याड्रिडको संग्रहालयहरू वा इ England्ल्यान्डको पबहरू जान्न चाहन्छन्। यति धेरै ईकेही देशहरूमा, शताब्दीयौं पुरानो युरोपेली सुन्दरता पुनःनिर्माण गर्न प्रयास गरिएको छ। यो हामीले भेट्टाएका शंघाईको मामला हो टेम्स टाउन।
1 थेम्स टाउन
2 टेम्स टाउनको भूत शहर
पहिले तपाईंले त्यो भन्नु पर्छ शंघाई चीनको सब भन्दा महानगरीय र अन्तर्राष्ट्रिय शहरहरू मध्ये एक हो। यो सँधै भएको छ, यो नयाँ छैन। यो पनि एक सहर हो जुन विश्वको सबैभन्दा जनसंख्या, करिब २ million करोड मानिस।
यो सँधै समुद्री व्यापारको लागि समर्पित शहर भएको छ, यहाँ उत्तम व्यवसाय भएको छ र एशियाले युरोपको सम्पर्कमा आएदेखि बेलायती व्यापारीहरू र अन्य पुरानो विश्व देशहरू यसको सडकमा बसोबास गरिरहेका छन।
थाम्स टाउन सोनजीian्ग जिल्लामा नयाँ अंश हो, डाउनटाउन शंघाईबाट करीव kilometers० किलोमिटर। यो जिल्ला यो एक उपनगरीय क्षेत्र हो, सहस्राब्दी, जुन क्षेत्रीय संस्कृतिको पालना मानिन्छ।
सोंगजियांग र डाउनटाउन शंघाई सबवे लाइनले जोडिएको छ, 9.। यहाँ सब भन्दा नयाँ चीज यो हो टेम्स नदीको नाममा आवासीय जिल्लाको नाम। जस्तो कि यसको नामले स .्केत गर्दछ वास्तुकला यूरोपीय हो र यस्तो देखिन्छ कि तपाईं लन्डनको केही टोलमा हुँदै जानुहुन्छ।
थेम्स टाउन चार किलोमिटर लामो छ र यसको डिजाइन र निर्माणको उद्देश्य नजिकैको सुनजियांग विश्वविद्यालय शहरको जनसंख्या समायोजन गर्नु हो। शहर शंघाईका मानिसहरू लाई सार्दै। यो ठूलो परियोजनाको हिस्सा थियो जसमा कुल नौ नयाँ शहरहरूको निर्माण शामिल थियो, सबै एक तरीकाले पश्चिमी शैलीमा "थीम्ड"।
यस प्रकार यस परियोजनामा ​​जर्मन शैलीको शहर, अर्को डच, अर्को स्पेनी, अर्को क्यानेडाली, इटालियन र स्कान्डिनेभियाई सामेल थिए। योजनाहरु पछाडि कम्पनी एटकिन्स थियो र के प्रकाश पहिलो पटक टेम्स टाउन थियो देखे। काम २०० 2006 मा सम्पन्न भयो।
टेम्स टाउनले एक वर्ग किलोमीटरको स्पेस ओगटेको छ र यो १०,००० मानिसहरूले बसोबास गर्न डिजाइन गरिएको हो। यो पारिवारिक छिमेकी हो, केही पसलहरू सहित, मानिसहरूलाई आपूर्ति गर्न पर्याप्त र केही पनि छैन, र यसले कसैलाई भीड नफर्काउने उद्देश्य राख्दछ।
घरहरू र फ्ल्याटहरू धेरै छिटोमा बेचिन्थ्यो महँगो मूल्य तर विशाल बहुमत "दोस्रो घर" को रूपमा बेचिन्थ्यो त्यसैले तत्काल नतिजा मूल्यहरुमा भएको वृद्धि र त्यो हो त्यहाँ वास्तवमा कोही पनि बस्ने छैन। एक भूत शहर।
टेम्स टाउनको भूत शहर
सा the्घाइका अधिकारीहरूले यो नयाँ शहरको भाग्य हुनेछ भन्ने सोचेका थिएनन् होला। द्रुत बिक्रीको कारण मूल्यहरू यति बढेर गए कि अन्ततः कुनै साधारण परिवारले त्यहाँ किन्न सकेन र अपार्टमेन्ट र घर खाली छोडियो।
मालिकको साथ, तर खाली। आज हामी मेट्रो लाइन take लिन सक्दछौं र यस खाली छरछिमेकको बारेमा जान्न सक्दछौं तर एकै समयमा धेरै सुरम्य पनि। यसका धेरै भवनहरू लण्डनको सडकबाट शाब्दिक रूपमा प्रतिलिपि गरिएको छ र अन्य अंग्रेजी शहरहरूबाट।
कब्ल्ड सडकहरू, यूरोपीयन भवनहरू, ढु stones्गा, इट्टा र चिनियाँ वास्तुकलाको कपाल होईन। परिणाम यो छ कि विवाह फोटोग्राफी पुस्तक को धेरै यो एक मनपर्ने सेटिंग को रूप मा छ। यो अविश्वसनीय देखिन्छ तर पन्ध्र वा २० वर्ष पहिले यहाँ केवल घाँस, खेत र गाईहरू थिए।
आज त्यहाँaसँग वर्ग छ विन्स्टन चर्चिल मूर्ति, दोस्रो विश्व युद्ध को अंग्रेजी प्रधानमन्त्री, पबहरू, ट्यूडर लग घरहरू र केहि अन्य बढि मध्यकालीन स्थान। सत्य यो हो कि यो सुरम्य छ ... जति धेरै मनोरञ्जन थीम पार्क।
यहाँ कसले बाँच्न चाहन्छ? ठिक छ, हुनसक्छ यो हाम्रोलागि धेरै आकर्षक छैन, तर जब तपाईंसँग एउटा प्लेन समात्न र १ 16 घण्टा युरोप यात्रा गर्नका लागि पैसा छैन भने चीनबाट, यो केवल कुनामा अवस्थित छ र यो अद्भुत हुन सक्छ।
व्यक्तिगत सराहना बाहिरs त्यहाँ धेरै वास्तुकारहरू छन् जसले यो खराब निर्माण गरिएको छैन भनेर विचार गर्छन्- अनुपात गलत छ, ढु stone्गाका प्रकारहरु को गलत प्रयोग गरीएको छ, र शैलिका मेल खाँदैन। यो एक Pastiche छ।
यो भन्न सकिन्छ कि अ English्ग्रेजी मानिस भन्दा बढी छ चिनियाँले अ by्ग्रेजीले बुझ्ने कुराको मानिस। स्पष्ट रूपमा, चिनियाँहरूले वास्ता गर्दैनन्। कोही मानिसहरु यहाँ बाँचिरहेका छन्, यद्यपि उनीहरु भन्छन् कि यो बिस्तारै जीवनमा आउँदैछ र आफ्नो घर भएका मानिसहरु समुदायको एक हिस्सा नै महसुस गर्न थालेका छन्।
बाँकी मानिसहरू भेट्न आउँछन्: फोटोहरू लिन, तिनीहरूका खाली वर्गहरूमा पिकनिक लिन, हिँड्न र सपनाको लागि तिनीहरू इ England्गल्याण्डमा छन्, केहि समयको लागि पनि। मलाई थाहा छैन म यहाँ बस्छु वा छैन तर यदि मसँग नजिक भए म हिड्न जान्छु, हैन त?
मुख्य कुरा यो हो चिनियाँहरूले के गर्छन् नयाँ छैन। संयुक्त राज्य अमेरिका, लगभग एक शताब्दी पहिले, उही उन्मादको अनुभव गर्‍यो र यदि तपाईंले थोरै अनुसन्धान गर्नुभयो भने तपाईंले विश्वभर "प्रतिलिपि शहरहरू" पत्ता लगाउनुहुनेछ। चिनियाँहरू यस प्रवृत्तिमा सम्मिलित हुन अन्तिमका हुन्, यति मात्र
गत वर्ष उनीहरू सबैको सब भन्दा सुन्दर अस्ट्रिया गाउँ, प्रतिकिलोपना निर्माण गर्‍यो, हलोस्ट्याट, बुट गर्नको लागि विश्व सम्पदा। उनीहरूले यसलाई मन पराउँछन्, हामी यो किस्ट विवरण हो भन्ने लाग्छौं। र हामी मध्ये कोही कोहीलाई प्रेम छ कि उनीहरु यो प्रेम गर्दछन्।
सत्य यो हो कि यस कार्यक्रम, "एक शहर, नौ शहरहरू" जुन हामीले माथि कुरा गर्यौं, खराब विचार होईन। शंघाई जस्तो मेगालोपोलिस डेकर्जेन्सी something्ग त्यस्तै चीज हो जुन अझै आवश्यक छ, जे होस्यस जस्तो प्रोजेक्ट साधारण व्यक्तिको लागि पहुँचयोग्य देखिदैन जो शहरी भीडभाडबाट बाहिर जान चाहन्छ।
चीन विश्वमा खुल्छ र चिनियाँहरूले त्यो संसार पत्ता लगाउँदछन् र उनीहरूलाई यो मनपर्दछ कि उनीहरू न केवल फेसन र चलनहरू अपनाउँछन् तर वास्तुकला पनि। चीनका धेरै नौवा धनीले बेभर्ली हिल्स-शैली म्यानहरू निर्माण गरे, उदाहरणका लागि, र नक्कल गर्दा तिनीहरू लाज मान्दैनन्।
मलाई त्यस्तै लाग्छ! विश्वको यस भागमा प्रतिलिपि तल झारिन्छ चिनियाँ संस्कृतिमा सबै ठीक छ। उनीहरूले वालेट, जोडी हन्टर बुट, सेल फोन, वा भवनको प्रतिलिपि गर्दछ। समस्या के हो?
पक्कै त्यहाँ चिनियाँ आर्किटेक्टहरू छन् जो यस "प्रतिलिपि उन्माद" सँग सहमत छैनन्, चीनको सबै सांस्कृतिक सम्पदा यो गर्न पर्याप्त पुरानो भए पछि ... तर फेसन फेसन हो। कसले यो बुझ्छ, उसलाई थाहा दिनुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » शहरहरू » संघाई » टेम्स टाउन, चीनको पुरानो इ England्ल्यान्डको एउटा टुक्रा
वेल्स मा सबै भन्दा राम्रो गर्मी स्थलहरु